Tarehimarika izay mampametra-panontani­ana ihany koa anefa, anaty fononteny, hoe sao dia mba misy ambadika politika, araka ilay fomba filazan’ny olona sasany azy tokoa? Firy andro nisesy moa izay no nilazana fa saika eto Antananarivo hatrany ny maro tamin’ireo marary vaovao ary tokana monja foana no avy any amin’ny toeran-kafa? Sao dia noho ny fanambarana matetika nataon’ilay solombavambahoaka iray ao Toamasina iny tokoa ary no tena nahabetsaka ny tranga tao tamin’ireny fotoana ireny? Toa noho ny nangingina ity farany dia nivadika taty an-drenivohitra tampoka indray ny basy, hoy ny fitenin-jatovo izay? Mbola maro ny fanontaniana manitikitika ny saina ankoatran’ireo manoloana izao raharaha izao saingy araky ny maha fononteny azy dia aleo aloha hajanona hatreo. Ny hirariana aza dia ny hoe enga anie mba ho diso izay eritreritra izay! Etsy ankilany moa dia mipetraka eo an-dohan’ny mpanara-baovao mandrakariva ny fanontaniana hoe hanao ahoana ny rahampitso? Mba afaka manantena tarehimarika midina amin’izay ve? Tarehimarika tena marina sy ara-pahasalamana fa tsy politika sanatria? Rahoviana ihany no mba ho vitsy na tsy hisy intsony mihitsy ny marary vaovao fa ireo sitrana no tena hirongatra ny isany? Samy mirary izany daholo ny rehetra raha mbola tia tanindrazana ihany koa ary inoana fa diso tanteraka ny fiheverana fa misy firehana Malagasy izay tsy mankasitraka izany hoe Madagasikara ho afaka amin’ity areti-mandoza malaza ity sy izay areti-mandoza hafa rehetra tafaraka aminy amin’izao fotoana izao. Mahatsiaro ho reraka ambony ihany ny ankamaroan’ny olompirenena matoa sahy mitsikera. Niaraha-nahatsiahy fa azo nosorohana ny fidiran’ity aretina ity teto. Tsy olona 1 sy 2 no efa nanao antsoantso ny hanidiana mialoha ny firenena fa maro saingy efa rano raraka moa ka ny hirariana dia mba samy hahay hifampihaino amin’izay.